Dabaaldegga Kibirka ee Sebtembar wuxuu ka taliyaa Malta, oo ah dahabka qarsoon ee Badda Mediterranean -ka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabhada Malta » Dabaaldegga Kibirka ee Sebtembar wuxuu ka taliyaa Malta, oo ah dahabka qarsoon ee Badda Mediterranean -ka
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • LGBTQ • Wararka Jabhada Malta • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Muuqaalka Grand Harbor, Valletta, kaliya hal meel oo la booqdo inta lagu gudajiro dabaaldega Malta Pride
Malta, oo ah jasiirad ku taal badda Mediterranean-ka, ayaa ah meesha ugu habboon ee lagu sii wadi karo dabaaldegyada Kibirka 10-ka illaa 19-ka Sebtember, ka dib markii la soo gabagabeeyay Mareykanka bishii Juun. Malta waxaa kaalinta 1-aad ka gashay ILGA-Europe oo ku jirta Liiska Rainbow-ga Midowga Yurub sannadkii 6-aad oo xiriir ah waana mid ka mid ah meelaha ugu safarada badan LGBTQ+ adduunka. Malta waxay gaartay dhibco dhan 94% xuquuqda LGBTQI ee xuquuqda aadanaha.
Malta waa mid ka mid ah meelaha ugu safarada badan LGBTQ+ adduunka.
Booqdayaashu waxay u dabaaldegi karaan Toddobaadka Pride Malta laga bilaabo Sebtember 10-19, 2021, oo ay ku jiraan Malta Pride March iyo riwaayad Sebtember 18, 2021.
Malta waxay qorshaynaysaa dhacdooyin kala duwan oo ay ku raaxaysato inta lagu guda jiro dabbaaldegga toddobaad-dheer oo hubinaya waayo-aragnimo xusuus leh dhammaan booqdayaasha LGBTQ+.
Toddobaadka Pride Malta waa fursad weyn oo loogu talagalay dadka safarka ah ee LGBTQ+ si ay u sahamiyaan saddexda jasiiradood ee walaalaha ah, Malta, Gozo, iyo Comino iyagoo u dabbaaldegaya toddobaadka kibirka meel safar ah oo loo yaqaanno 7000 sano oo taariikhi ah, farxadda cunnada oo ay ku jiraan 5 maqaayadaha xiddigta Michelin, xeebaha waaweyn iyo nolosha habeenkii. Malta waxay qorshaynaysaa dhacdooyin badan si ay ugu raaxaystaan ​​inta lagu guda jiro dabbaaldegga toddobaad-dheer oo hubinaya waayo-aragnimo xusuus leh dhammaan booqdayaasha LGBTQ+.
Luzzu, Doonta Kalluumeysiga Malta ee Marsaxlokk
Toddobaadka Pride Malta wuxuu leeyahay toddobaad ka buuxa dhacdooyin nooc kasta ah oo ay ku jiraan moodada, farshaxanka, filimka iyo muusigga.
REFRACTION- Bandhiga Farshaxanka Muuqaalka - 10-Sebtember
POP by Nacnac - Sebtember 11 & 17
Muujinta Astaanta Calanka Kibirka - 12-Sebtember
Maalinta Xeebta Kibirka - 12-Sebtember
Bandhigga Farshaxanka iyo Farshaxanka ee LGBTQI - Sebtembar 12 - 18
Kulammada Maori - 12-Sebtember
Doodda Bulshada - Sebtembar 14- 17
Pride Open Mic Night - 15-Sebtember
Habeennada Mixology - 15-Sebtember
Shirka xuquuqda aadanaha - 16-Sebtember
Qabashada Billaha ah ee Warshadda Shukulaatada Malta - 16-Sebtember
Baarista filinka - 16-Sebtember
David Bowie fiidkii bulshada - 17-Sebtember
Kulankii Bulshada Kibirka - 17-Sebtember
#YouAreAreInre waxaa ka mid ah riwaayada kibirka Malta - 18-Sebtember
Xafladii Dambe - 18-Sebtember
Baaritaanka dukumentiga: Kibirka waa Mudaaharaad - 19-Sebtember
Ku -soo -dhawaynta Maraykanka ee Ku -soo -dhawaada Malta - waa inay adeegsadaan barnaamijka VeriFLY
Socotada Mareykanka ilaa Malta waxay heli doonaan fursad ay ku xaqiijiyaan fayoobaantooda oo ay ku siiyaan dokumentiyo kale, sida ay u baahan yihiin Mas'uuliyiinta Caafimaadka Malta, iyada oo loo marayo barnaamijka VeriFLY kaas oo gacan ka geysanaya hagaajinta tallaalka COVID-19, ansixinta dukumintiga, oo soo bandhiga natiijooyin cad , hab akhris-saaxiibtinimo leh. Ka dib markay ku abuuraan astaan ​​aamin ah aaladooda mobilada, rakaabku waxay gelinayaan macluumaadka tallaalka iyo dukumentiyo kale sida loogu baahan yahay si toos ah barnaamijka VeriFLY. App -ka VeriFLY wuxuu xaqiijin doonaa in macluumaadka rakaabka uu la jaanqaadayo shuruudaha ay dejisay Malta oo uu soo bandhigo baas fudud ama farriin guuldaraystay. Intaas ka dib, rakaabka waxaa lagu hagi doonaa inuu buuxiyo Foomka Goobta Rakaabka gelitaanka Malta. Barnaamijka VeriFLY, oo laga heli karo Google Play iyo Apple App Store, ayaa u saamaxaya dadka isticmaala inay dhaqaajiyaan kaarka “Safarka Malta”, kaas oo koobaya shuruudaha gelitaanka Malta, oo loo habeeyay liiska hubinta isticmaale-saaxiibtinimo, ka dib dhammaystirka dhammaan aqoonsiyada loo baahan yahay .
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Dhacdooyinka Toddobaadka Kibirka, booqo:
Jasiiradaha qorraxda leh ee Malta, oo ku yaal badhtamaha Badda Mediterranean-ka, waxay hoy u yihiin diirad aad u layaab leh oo ah hidaha la dhisay, oo ay ku jiraan cufnaanta ugu sareysa ee Goobaha Dhaxalka Adduunka ee UNESCO meel kasta oo ka mid ah qaran kasta. Valletta oo ay dhiseen Knights-kii kibirka lahaa ee St. John waa mid ka mid ah meelaha UNESCO iyo Caasimaddii Dhaqanka ee Yurub ee 2018. Aabbaha Malta ee dhagaxu wuxuu u dhexeeyaa qaab dhismeedka dhagaxa xorta ah ee ugu da'da weyn adduunka, ilaa mid ka mid ah kuwa ugu cabsida badan Boqortooyada Ingiriiska. nidaamyada difaaca, waxaana ka mid ah isku -dhafka hodanka ah ee dhismaha gudaha, diinta iyo milatariga laga soo bilaabo waagii hore, dhexe iyo xilliyadii hore ee casriga ahaa. Iyada oo leh cimilo qorax leh, xeebo soo jiidasho leh, nolol habeennimo oo aad u wanaagsan, iyo 7,000 sano oo taariikh xiiso leh leh, waxaa jira waxyaabo badan oo la arko oo la sameeyo. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Malta, booqo www.visitmalta.com.
Wixii macluumaad dheeraad ah, soo booqo: www.visitmalta.com, https://www.visitmalta.com/en/gay-friendly-malta